Xarakada Alshabaab iyo Ciidamada Dowlada KMG ah oo uu dagal ku dhexmaray gobolka Jubada hoose – SBC
Xarakada Alshabaab iyo Ciidamada Dowlada KMG ah oo uu dagal ku dhexmaray gobolka Jubada hoose
Ciidamada Dowlada KMG ah taafeersan iyo kuwa xarakada Alshabaab ayaa maanta ku dagaalamay qeybo ka mid ah gobolka Jubada hoose ee koonfurta dalka .
Dagaaladaas ayaa la sheegay in uu ahaa mid xoogan oo sida laga warhayo ay soo qaadeen dagaalka ciidamada Xarakada Alshabaab Almujaahidiin, waxaanu xoogiisu ka dhacay inta u dhexeysa Dhoobley iyo Afmadow
Lama yaqaan ilaa iyo iminka khasaaraha dhabta ah ee dagaalkaasi ka dhashay balse mid ka mid ah sarakiisha ciidamada DKMG ah taabacsan ayaa Laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da u sheegay in khasaare ba’an ay u geysteen xarakada Shabaab Almujaahidiin.
Waxaa sidoo kale uu intaasi ku daray sarkaalkaasi in weerarkii ay soo qaadeen xoogaga alshabaab uu ka gaaray khasaare ayna ciidamada dowladu iska caabiyeen, dagaalkana xoogiisu uu ka dhacay gudaha tuulada Taabo oo 60 km qiyaastii u jira degmada Dhoobley ee gobolka jubada hoose .
Majiraan ilaa iyo iminka wax hadal ah oo ka soo yeeray xarakada kaas oo loogaga hadalayo sheegashada ciidamada Dowlada ee ah in dagaaladaasi ay guulo ka gaareen .
Mudooyinkii ugu dambeeyay deegaanadaas waxaa ka taagnaa xiisado colaadeed iyo dhaq dhaqaaqyo ciidan oo ay halkaasi ka wadeen ciidamada Dowlada KMG ah iyo kuwa Saarkambooni oo isku dhinac ah iyo kuwa xarakada Mujaahidiinta Alshabaab,